Inhloko ZeNdaba Mpandula 21, 2021
Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uqale lamhla kulabantu abalutshwana ababukisayo njalo bathi balethemba lokuthi bazathola ibhizimusi.
Amapholisa abopha okwesikhatshana umkhokheli wenhlanganiso yeIbhetshu Likazulu uMnu. Mbuso Fuzwayo obeqhuba umbuthano ophathelane leGukurahundi ngesikhathi kunanzwa ilanga leInternational Day of Peace namuhla.
Emizameni yokumelana lokumemetheka kweCovid 19, uhulumende we Zimbabwe ubika ukuba usenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezimbili-2,082,043 ngokugcweleyo ijekiseni lokuzivikela kuleli gcikwane, kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu-2,962,145.
Kwezomnotho: Sicubungula ukuthi imbukiso ye Zimbabwe International Trade Fair leIntra-Africa Trade Fair ingathuthukisa izinga lokuthengiselana lamanye amazwe.
Ku Livetalk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe “The Connection” sikhangela ukuqansa kwenani labafundi ezikolo asebebanjwa yiCovid 19 kanye lomsebenzi wokulwisana lokumemetheka kwaleli gcikwane eZimbabwe.